Amosi 2 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zakwaMowabhi, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le nto ngenxa yokuwatshisa kwakhe amathamboamathambo ookumkaniookumkani bakwaEdom, aba yikalika:
2 ndiya kuthumela umliloumlilo kwaMowabhi, utshise iingxande ezinde zeKeriyoti, afe uMowabhiuMowabhi, kuphithizelwa, kuhlatywa umkhosi, kuvuthelwa izigodlo.
3 Ndomnqumla umgwebi phakathi kwakhe, ndibabulale bonke abathetheli bakhe kunye naye; utshoutsho uYehova.
4 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zakwaYuda, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le ntongenxa yokuwucekisa kwabo umyalelo kaYehova, abayigcina imimiselo yakhe; amanga abo, ababelandela wona ooyise, abandwendwisa:
5 ndiya kuthumela umliloumlilo kwaYuda, utshise iingxande ezinde zeYerusalem.
6 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ngenxa yezikreqo ezithathu zakwaSirayeli, ngenxa yezineandiyi kuyibuyisa umvaumva le nto ngenxa yokuba bathengisa ilungisa ngesilivere, bathengisa ihlwempu ngeembadada ezimbini;
7 bona abo bazondayo ukuba intlokointloko yezisweli ibe nothuli lomhlaba, bayijike indlelaindlela yabalulamileyo; umntu noyise baya ntombini-nye, ukuze balihlambele igamaigama lam elingcwele;
8 banaba phezu kweengubo ezisisibambiso ngasezibingelelweni zonke, basela iwayini yabahlawulisiweyo endlwini yothixo wabo.
9 Kanti mna ndamtshabalalisa ebusweni babo umAmori, obude bunjengobude bemisedare, obeliqele njengemioki; ndasitshabalalisa isiqhamo sakhe ngaphezulu, neengcambu zakhe ngaphantsingaphantsi.
10 Ke mna ndaninyusa ezweni laseYiputa, ndanikhokela entlango iminyaka emashumi mane, ukuze nilihluthe ilizweilizwe lomAmori.
11 Ndavelisa koonyana benu abokuba ngabaprofeti, nakumadodana enu abokuba ngabazahlulileyo. Hi, akunjalo na, nyana bakaSirayeli? utshoutsho uYehova.
12 Ke nisuke nabaseza iwayini abazahlulileyo; abaprofetiabaprofeti nabawisela umthethoumthetho wokuthi, Ize ningaprofeti.
13 Yabonani, ndiya kunixinzelela phantsi, njengokuba ixinzelelwa phantsi inqwelo ezele zizithungu.
14 Wokhohlwa kukusaba onamendu, owomeleleyo angawaqinisi amandlaamandla akhe, igorha lingabusindisi ubomi balo.
15 Nophethe isaphethaisaphetha akayi kumisa, nonyawo zinamendu angazisindisi, nokhwele ehasheni angabusindisi ubomi bakhe;
16 nontliziyo ikhaliphileyo phakathi kwamagorha asabe eze ngaloo mini; utshoutsho uYehova.
Exploring the Meaning of Amosi 2
IEksodus 22:25, 26
Amanani 6:2, 3, 13:32, 32:13
IDuteronomi 2:7, 8:2, 9:1, 2
1 Samuweli 3:20
2 Kumkani 26, 17:19, 25:9
2 yeziKronike 14
UIsaya 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10
NguYeremiya 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1
UHoseya 8:14, 12:3
Amosi 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1